ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ တွေ့နိုင်မည့် မျိုးရင်းတိရစ္ဆာန် မျိုး? - Yangon Media Group
ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာတွေ့နိုင်မည့် ရေခဲတောင်မှ ပန်ဒါနီ၊ မြန်မာ့ဆင် အစရှိသော မြန်မာ့မျိုး ရင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များကြောင့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)ကို နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည် တစ်သန်းခန့် လာ ရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိပြီး မြန်မာ့ဆင်များနှင့် ရှားပါးမျိုးစိတ်များ၊ မြန်မာ့မျိုးရင်း မျိုးစိတ်များကို အဓိကထားလေ့လာကြသည် ဟုဆိုသည်။
”နိုင်ငံခြားသားဆွဲဆောင်ဖို့ကျတော့ ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်ရုံ Acient Zoo ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်များများလက်ရာ က အင်္ဂလိပ်လက်ရာတွေများတယ်။ နိုင်ငံ ခြားသားတွေက အဆောက်အအုံပိုင်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ နောက်တစ်ခုကဆင်ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သူတို့အနောက် နိုင်ငံတွေမှာ ဆင်မရှိဘူး။ ရှိလည်း အာဖရိက ဆင်ပဲရှိတယ်။ အာရှဆင် မရှိဘူး။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာပဲ ကြည့်နိုင်မယ့် တိရစ္ဆာန်တွေက မြန်မာ့မျိုးရင်း ပန်ဒါနီရယ်၊ ကြယ်လိပ်ရယ်ရှိပါတယ်။ အောက်ချင်းအောက်လောင်း ငှက်ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကြိုက်ပါ တယ်”ဟု တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)မှ စီမံမန်နေဂျာဦးမျိုးကျော်သူက ပြောသည်။
ကျားဖြူပြသထားသည့် ကိုလိုနီခေတ် လက်ရာအဆောက်အအုံသည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရေး ထိုးထားပြီး သက်တမ်း ၁ဝ၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ် ကာ သက်တမ်း ၁၁ဝ ကျော်သောအ ဆောက်အအုံများကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)တွင် ရှားပါး မျိုးစိတ်များလည်း ပြသထားပြီး တိရစ္ဆာန်များအသစ်ထပ်တိုးနိုင်ရန် သစ်တောဦးစီး ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
”ရှားပါးမျိုးစိတ်က ဆင်ဆိုလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အကောင်ရေလျော့လာ ပြီ။ ကချင်ပြည်နယ် ရေခဲတောင်မှာတွေ့ရ တဲ့ပန်ဒါနီဆို မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်းမှာပဲနေတဲ့ အကောင်ပေါ့။ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှားပါးလာတဲ့ ကြံ့တွေ၊ ကျားတွေပြသထားတယ်။ ကျားကတော့ ဘင်္ဂလားမျိုးပေါ့။ တိရစ္ဆာန်တွေ ထပ်တိုးဖို့ဆိုရင် တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်ရတာပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရန်ကုန်)သည် သက်တမ်း (၁၁၂)နှစ်ပြည့်တော့မည် ဖြစ် ပြီး တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၃၂ မျိုး၊ အကောင်အရေအတွက် ၁၄ဝဝ နီးပါး မွေးမြူ စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထုကို တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာများ ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တံတားတစ်စင်းပေါ်မှ ယာဉ်တစ်စီး ပြုတ်ကျရာ လူ ၂၁ ဦးသေ၊ ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ပေါ်တူဂီလူငယ် ဂျာအိုဖိလစ်ကို ယူရို ၁၂၆သန်းဖြင့် အက်သလက်တီကို ခေါ်ယူ
ပေါ်တူဂီ အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ စီရော်နယ်ဒို ဘယ်လောက် အရေးပါခဲ့သလဲ
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရရှိသော လူမျိုးများ စာရင်းမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိ ??
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အေပက်အဖွဲ့ဝင် နိုင်င?